Fanatanjahantena mekanika – «Rallye du Boeny» :: Fiarakodia telopolo hifanenjana any Mahajanga • AoRaha
Fanatanjahantena mekanika – «Rallye du Boeny» Fiarakodia telopolo hifanenjana any Mahajanga
Hotanterahina any Mahajanga amin’ny 15 – 17 aogositra ho avy izao ny dingana fahadimy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara amin’ny taranja hazakaza-piarakodia na ny “Rallye du Boeny”. Fiarakodia telopolo no handray ny fiaingana rahampitso, araka ny lisitra navoakan’ny Federasiona malagasin’ny fanamoriana fiarakodia, tamin’ny fiafaran’ny fisoratana anarana omaly.
Isan’ireo mbola hifaninana ireo lohalaharana vonjimaika amin’ny fifaninanam-pirenena, toa an-dry Rivo sy Ando (Subaru Imprezza), izay mitarika vonjimaika ny filaharana. Toy izany ihany koa i Bona sy Ny Anjara miampy an’i Fred sy Andry Tahina, izay mpifanandrina akaiky amin’izy mirahalahy voalohany. Hiady ny ho lohalaharana ihany koa i Tahina sy Ranto, izay nandrombaka ny amboara tany Moramanga, tamin’ny dingana fahefatra ho an’ny fifaninanam-pirenena. Samy marika Subaru, sarihina kodiarana efatra avokoa ny fiaran’izy ireo.
Fifaninanana ao anatin’ny fifaninanana indray ny an’ireo fiarakodia tsy mataho-dalana efatra, mandritra ny telo andro hanaovana ny “Rallye du Boeny”. Hifampitady amin’izany ry Haja Danielson-Rivo (SsangYong Musso), Davonjy-Tsilavo (Foton Tunland), Freddy-Jimmy (Isuzu D-Max) ary Teddy-Herman (Ford Ranger).
Andrasana kosa eo amin’ny fiarakodia sarihina kodiaran-droa ny afitsok’i Olivier sy Haingo Ramiandrisoa, izay tompondakan’i Madagasikara fahiny tamina fiara sarihina kodiarana efatra saingy hitondra Citroën C2 izy mianaka ireo amin’ity andiany faha-14 amin’ny “Rallye Vacances” ity. Mpifanandrina akaiky amin’izy ireo i Nirina-Alcazaria Jr (Peugeot 206) sy Anjabob-Tsitsi (VW Golf) ary ireo hafa.
Kitra amboaran’ny CAF :: Nandresy ny TS Galaxy Afrika Atsimo